FAHASALAMANA MANAKAIKY VAHOAKA : Ho maimaim-poana ny vonjy aina voalohany eny amin’ny Hopitaly
Feno 130 taona ny Hopitaly miaramila etsy Soavinandriana. Mifanandrify indrindra amin’izay ny fanavaozana ny sampandraharaha misahana ny vonjy aina eny an-toerana mba hahatsara hatrany ny fandraisana ireo marary. 18 octobre 2021
Notokanan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 12 oktobra lasa teo ity sampandraharaha ity. Nandritra io no nilazany fa tsy handoavam-bola ny fitsaboana voalohany ao amin’ny sampana vonjy aina.
Ny fahasalamana no voalohan-karena, hoy ny Filoha, ary izany indrindra no mahatonga azy natao ho laharam-pahamehana. Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa sy velirano fahadimy dia “ny fahasalamana ho an’ny rehetra tsy an-kanavaka”. Anisan’ny paikady hahatratrarana izany ny fametrahana fotodrafitrasa manara-penitra manerana ny Nosy ary manakaiky ny vahoaka. Mamaly ireo filana ireo ity Sampandraharaha misahana ny vonjy aina eto anivon’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana ity (HOMI). Tsy ny trano ihany no nasiam-panatsarana, fa eo ihany koa ny fampitaovana ny sampandraharaha, izay nomena fitaovana isan-karazany ilaina amin’ny famonjena ny ain-dehibe, amin’ny famelomana aina, sy ireo fanafody samihafa ilaina amin’izany.
Nanome toromarika an’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Fahasalamana moa ny Filoha Andry Rajoelina, fa ireo marary rehetra tonga manatona ity sampandraharahan’ny vonjy aina ity dia tsy maintsy raisina avy hatrany ary tsy mandoa vola izy ireo. Efa misy ny tetibola natokan’ny Fitondram-panjakana ho amin’izany ary efa mipetraka ihany koa ny lamina rehetra eny anivon’ireo toeram-pitsaboana maro izay ahitana ny fandraisana an-tanana an’ireo marary izay tena sahirana ara-pivelomana, dia ilay antsoina hoe : "Fonds d’urgence sanitaire". Ary amin’ny maha "Vonjy Aina" azy, dia fitsaboana faran’izay haingana no hatao, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, ka tsy tokony hisy intsony ny fampiandrasana ny olona marary izay tonga, mandritra ny ora maro.
Fantatra nandritra ity fankalazana ny faha-130 taonan’ny Hopitaly Homi ity koa fa hapetraka tsy ho ela ao eny an-toerana ny fitaovana fandidiana fo ary hametrahana skanera eny amin’ny hopitaly rehetra manerana ny Distrika. Raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ity ivon-toeram-pitsaboana ity, maro be ireo marary mila fandidiana fo saingy noho ny tsy fisian’ny fampitaovana sy ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa mifanaraka amin’izany dia voatery alefa any ivelany ireo marary. Sarotra anefa ny famindrana marary iray ho any ampitan-dranomasina hanohy ny fitsaboana tena noho ny elanelan-tany.
Samy niaiky ireo mpitsabo sy marary tonga teny an-toerana fa ilana fanovana goavana ny tontolon’ny fitsaboana eto Madagasikara ka dingana ho amin’izany izao vitan’ny Filoham-pirenena izao. “Ny irinay indrindra dia ny hisian’ny fitaovana ampy, fotodrafitrasa ampy eto an-toerana hahafahana mandray avy hatrany ireo marary. Efa maro be ny marary tonga ety aminay saingy noho ny tsy fahampian’ny fitaovana dia voatery izahay mandefa azy any ivelany”, hoy ny mpitsabo iray teny an-toerana.
Natsangan’ny mpanjaka Ranavalona III
Ara-tantara, ny HOMI Soavinandriana dia efa tamin’ny andron’ny Mpanjakavavy Ranavalona faha-III no niorina voalohany. Tamin’ny 13 aogositra 1891 no nitokanan’ny mpanjakavavy Ranavalona III sy ny Praiminisitra Rainilaiarivony ny Trano Fitsaboana Soavinandriana, izay anisan’ny Hopitaly voalohany taorian’ny tobim-pahasalamana tao Analakely-Antananarivo tamin’izany. Taorian’izay dia nalain’ny Jeneraly Gallieni ho hopitaly fitsaboana ny miaramila frantsay sy ny teratany frantsay ny toerana, ka lasa “Hopitaly kolonialy Soavinandriana” indray no anarana nampisalorana azy. Ny 3 jolay 1975 no nanomezana anarana hoe « Girard et Robic » izay namorona ny vaksiny fanefitry ny pesta. Tamin’ny 25 novambra 1977 kosa no naverina tamin’ny fitondram-panjakana malagasy izany, nomena ny anarana : “Hopitaly Miaramila Soavinandriana”. Nanomboka tamin’io fotoana io dia ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny fitantanam-bola tamin’izany no niahy mivantana ny Hopitaly Homi. Ny Profesora Jules Kapisy kosa no Tale voalohany, ary nodimbiasan’ireo dokotera miaramila maro taorian’izay.
Natao ho an’ny rehetra
Na hopitaly Miaramila aza no iantsoana ity toerana ity dia mandray ny marary rehetra ny toerana. Afaka mitsabo tena eny avokoa na olon-tsotra aza. Azo lazaina ho rafitra matanjaka eo am-pelatanan’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ny Homi satria amin’ny alalan’io no hanatrarany ny tanjona mifandraika amin’ny tanjona napetraky ny minisitra ankehitriny ao anatin’ny fanavaozan-drafira atao eo anivon’ny Tafika, dia ny “Tafika manakaiky vahoaka” sy ny hoe : “mpitandro filaminana miasa ho an’ny vahoaka”. Isan’ireo tena andraisan’ny miaramila andraikitra mivantana moa ny fiadiana tamin’ny valanaretina covid-19 teo, ny fanampiana ireo iharan’ny kere any atsimo ary ny fidinana ifotony amin’ny alina hiarovana ny vahoaka sy ny fananany ho an’ny eto an-drenivohitra sy ho an’ireo faritra mena amin’ny asan-dahalo. Nambaran’ny Filoham-pirenena fa efa mihoatra ny 101 ny CSB natsangana manerana ny Nosy ary miisa 13 ny Hopitaly lehibe voapetraka manerana ny Faritra. Tafiditra ao anatin’ny fahasalamana manakaiky vahoaka avokoa ireo.